Sacuudi Carabiya oo ugu hambalyeysay Biden guushii doorashada Mareykanka | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Sacuudi Carabiya oo ugu hambalyeysay Biden guushii doorashada Mareykanka
Sacuudi Carabiya oo ugu hambalyeysay Biden guushii doorashada Mareykanka
Dhaxal-sugaha Boqortooyada Maxamed bin Salmaan wuxuu bixinayaa hambalyo ka badan 24 saac kadib markii Biden uu ka adkaaday Donald Trump
Dhaxal Sugaha Boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed Bin Salmaan wuxuu xiriir dhow la leeyahay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trum
Sacuudi Carabiya ayaa ugu dambeyn ugu hambalyeysay Joe Biden Axadii guushii uu ka gaadhay doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka, in ka badan 24 saacadood kadib markii uu ka adkaaday Donald Trump, oo xiriir dhaw la lahaa shaqsiyan Dhaxal Sugaha Boqortooyada Mohammed bin Salman (MBS).
Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka ayaa balan qaaday ololahiisa dib u qiimeynta xiriirka uu la leeyahay boqortooyada, isagoo dalbaday in lala xisaabtamo wax badan oo ku saabsan dilkii saxafiga Sacuudiga u dhashay ee Jamal Khashoggi oo lagu dilay qunsuliyada Istanbul ee Turkiga wuxuuna ku baaqay in la joojiyo taageerada Mareykanka ee dagaalka Yemen.
Madaxweynaha la doortay Biden wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo qorshooyinka lagu xukumo Mareykanka kala qeybsan
Madaxweynaha la doortay Joe Biden ma beddeli doonaa siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka?
Ka dib markii Joe Biden uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada Mareykanka, maxaa xigi doona?
Dagaal loogu talagalay xakamaynta Senate-ka Mareykanka ayaa sugaya Georgia ka dib guushii Biden
Iyadoo dowladaha kale ee carabtu ay u tartamayaan inay u sacbiyaan qofka la tartamaya Dimuqraadiga, MBS, oo ah ninka xukuma boqortooyada, ayaa ka aamusay codbixinta Mareykanka xitaa isagoo ereyo diiran u diray madaxweynaha Tanzania dib u doorashadiisa. Trump wuu diiday inuu qirto tartanka wuxuuna wacad ku maray inuu la tirin i doono natiijada.
Markay ahayd 19:32 GMT Axadii, Boqorka Sacuudi Carabiya Salmaan iyo wiilkiisa, MBS, waxay ugu hambalyeeyeen Biden iyo Madaxweyne kuxigeenka la doortay Kamala Harris guusha ay ka gaareen doorashada, wakaalada wararka ee SPA ayaa werisay.
“Boqor Salmaan wuxuu amaanay xiriirka sharafta leh, taarikhiga ah iyo xiriirka dhow ee ka dhexeeya labada dal ee saaxiibka ah iyo dadkooda taas oo qof walba uu u muuqdo inuu xoojinayo isla markaana horumar ka sameynayo heerar kasta,” SPA ayaa intaas ku dartay
Xiriirka MBS iyo Trump wuxuu bixiyay keyd ka dhan ah dhaleeceynta caalamiga ah ee ku saabsan diiwaanka xuquuqda Riyadh ee ka dhashay dilkii Khashoggi, doorka Riyadh ee dagaalka Yemen iyo xiritaanka haweenka u dhaqdhaqaaqa.
Meelahaas ayaa hadda laga yaabaa inay noqdaan dhibco u dhexeeya Biden iyo Sacuudi Carabiya, oo ah dhoofiyaha ugu weyn ee saliida iyo iibsada hubka Mareykanka.
“Waxa kaliya ee ka xun COVID-19 wuxuu noqonayaa BIDEN-20,” ayay qortay isticmaale Twitter-ka Sacuudi ah Dr Muna, halka kuwa kale oo badan oo Sucuudiga ah oo isticmaala baraha bulshada ay si fudud u iska indha tireen natiijada saacadihii ugu horeeyay ka dib markii shabakadaha Mareykanka ay ugu yeereen doorashada Biden.
Ilo siyaasadeed oo Sacuudi ah ayaa hoos u dhigay halista khilaaf ka dhex dhaca boqortooyada iyo Mareykanka, iyadoo tilmaamaysa xiriirka taariikhiga ah ee Riyadh iyo Washington.
Laakiin wargeyska Sacuudi Carabiya ee Okaz ayaa soo bandhigay dareen hubaal la’aan ah oo ku saabsan sida mustaqbalku ugu ciyaari doono boqortooyada. “Gobolku wuxuu sugayaa… una diyaar garoobayaa… waxa dhici doona ka dib guushii Biden,” ayay ku qortay maqaal bogga hore.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa ka adkaaday Donald Trump Sabtidii
Boqortooyada lagama yaabo inay sugto waqti dheer. Neil Quilliam, oo ah ku-xigeen ka tirsan xarunta cilmi-baarista ee Chatham House ee Britain, ayaa sheegay in maamulka Biden ay u badan tahay inuu raadin doono inuu muujiyo goor hore diidmadiisa siyaasadaha gudaha iyo dibedda ee Sacuudiga.
“Hoggaanka Sacuudiga wuxuu ka walaacsan yahay in maamulka Biden iyo Congress-ka cadaawadda leh ay sameyn doonaan dib u eegis buuxda oo ku saabsan xiriirka, oo ay ku jiraan dib-u-qiimeynta xiriirka difaaca sidaas darteedna waxay u badan tahay inay sameeyaan dhawaaqyo wanaagsan oo ay u dhaqaaqaan joojinta colaadda Yemen,” ayuu yiri.
Sacuudi Carabiya waxay ahayd mid si xamaasad leh u taageerta Trump “cadaadiska ugu badan” ee cunaqabateynta adag ee saaran gobolka ay xifaaltamaan ee Iran. Laakiin Biden wuxuu sheegay inuu ku laaban doono heshiiskii Nukliyeerka ee sanadkii 2015 dhex maray quwadaha adduunka iyo Tehran, heshiiskaas oo laga wada hadlay markii Biden uu ahaa madaxweyne ku xigeenka maamulkii madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama.
Abu Zaid, oo ah Khasnaji dukaanka weyn ee Riyadh, ayaa sheegay inuu rajeynayo in Biden uu qaadan doono waddo ka duwan tii hore. “Kuma faraxsani guusha Biden, laakiin waxaan rajeynayaa inuu wax ka barto qaladaadka Obama uuna ogaado in Iran ay tahay cadaw guud,” ayuu yiri.
Ilo siyaasadeed oo Sacuudi ah ayaa sheegay in boqortooyada ay “awood u leedahay inay la macaamisho madaxweyne kasta maxaa yeelay Mareykanku waa dal leh hay’ado waxaana jira shaqo badan oo hey’adeed oo u dhaxeysa Sacuudiga iyo Mareykanka.”
“Xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka waa mid qoto dheer, waaraya, istiraatiijiyad leh oo aan u nugul isbeddel sababtoo ah madaxweyne ayaa isbedela,” ayuu yiri.
MBS wuu diiday inuu amro dilka Khashoggi, laakiin 2019 wuxuu qirey la xisaabtanka shaqsiyeed asagoo dhahaya waxay ku dhacday saacadiisa. Riyaad waxay xirtay sideed qof inta udhaxeysa 7 ilaa 20 sano kiiskan.
Previous articleMa Aqrisatay Qudbadii ugu dambeeysay Sadam Xuseen. Taariiqda Ayey Gashay
Next articleCiidanka Kumaandooska xoogga dalka Soomaaliya ee DANAB oo howlgal qorsheysan ka fuliyay tirsan Gobolka Jubbada Dhexe..
Hay’adda maareynta Musiibooyinka dalka Turkiga ee loo soo gaabiyo (AFAD) ayaa shaacisay inuu sii kordhay Khasaaraha ka dhashay dhul-gariirkii xooganaa oo Jimcihii lasoo dhaafay...